Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Qalabka Gargaarka Koowaad ee Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Qalabka Gargaarka Degdegga ah
Qalabka Gargaarka Degdegga ah macno ballaadhan, dhammaan qalabka badbaadin kara nolosha waqti gaaban waa qalabka gargaarka degdegga ah. Caadi ahaan waxa loogu yeeraa sida qalabka degdega ah waxaa iska leh dareenka cidhiidhiga ah, badiyaa cisbitaalka si loo badbaadiyo bukaanada qalabka caadiga ah ee lagama maarmaanka u ah.
Bailikind Qalabka Gargaarka Degdegga ah ee tayada la isku halayn karo, oo dhammaystiran, oo ay ku jiraan qalabka gargaarka degdegga ah ee hawl-badan leh, bareelo gargaarka degdegga ah, qalabka gargaarka degdegga ah iyo alaabo kale.
Isticmaalka sayniska ee Qalabka Gargaarka Degdegga ah waa cabbir muhiim ah si loo xaqiijiyo badbaadadayada shakhsi ahaaneed iyo caafimaadkayaga. Baili Kant daryeelka nolosha iyo caafimaadka!
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Qalabka Gargaarka Degdegga ah oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Qalabka Gargaarka Degdegga ah soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Qalabka Gargaarka Degdegga ah la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.